Gulufka loogu jiro magacaabista R’iisul wasaaraha cusub iyo kulamo socdo | Keydmedia
Gulufka loogu jiro magacaabista R’iisul wasaaraha cusub iyo kulamo socdo
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa dadaal ku bixineyso in ay soo saarto Ra'iisul wasaare u janjeero dhanka siyaasadeeda.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay ku qulqulayay Mas'uuliyiin iyo Siyaasiyiin xil doon ah, kuwaasoo guluf ugu jira sidii ay ku heli lahaayeen kursiga Ra’iisul wasaaraha, kadib markii kheyre la eryay Sabtidii tagtay.
Wararka Keydmedia Online helayso ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo uu wado kulamo wada-tashi ah, oo uu la yeelanayo la-taliyeyaashiida gaarka iyo Siyaasiyiinta aadka ugu dhow, isagoo doonayo in uu si deg deg ah kusoo magacaabo Ra’iiul wasaaraha cusub.
Ra’iisul wasaaraha cusub ayaa aad loo hadal hayaa in uu ka soo dhex bixi doono Beesha Sacad Siciid ee Habargidir, waxaana durbaba miiska lasoo saaray xubno katirsan Beeshaas oo aad loo hadal hayo in loo magacaabi doono Ra’iisul wasaare.
Inkastoo aan la hubin shaqsiga rasmiga ah ee Ra’iisul wasaaraha loo magacaabayo, ayaa hadana laga yaabaa in Madaxweynuhu uu nidaamka 4.5 uu meel kale u jiheeyo, taasoo keeni karto in Ra’iisul wasaaraha Beel/qabiil kale laga dhigo.
Farmaajo ayaa xalay la kulmay madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaalle Geelle [Xaaf], iyadoo wararku sheegayaan in kulanka intiisa badan looga hadlay arinta la xiriirta magacaabista Ra’iisul wasaaraha cusub.
Dhinaca kale, wararka ayaa sheegaya in Ra’iisul wasaaraha cusub uu ka imaan karo dhanka mucaaradka, waxaana xusid mudan in xalay guddoomiyaha Gollaha Shacabka Maxamed Mursal iyo ku xigeenkiisa Muudey ay kulan la qaateen hoggaanka Madasha Xisbiyada Qaran. [Halkan ka akhri warbixinta kulanka]
Keydmedia Online weli ma xaqiijin karto shaqsiga rasmiga ah ee noqonaya Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, hase yeeshee waxey aqristayaasheeda u balan qaadeysaa in ay si deg deg ah ula socod siin doonto, hadba wixii ku soo kordho arintaan.
Nin Hoobiye ka tuuri rabay degmada Dayniile oo la qabtay
Warar 25 September 2020 22:10
Ninkan waxaa ka muuqda jirdil ay ciidanku u geysteen xilligii ay qabanayeen.
Howlgal miino baaris ah oo laga sameeyey J/hoose
Warar 25 September 2020 17:03
Warar 25 September 2020 16:58
Banaanbax looga soo horjeedo ciidamada Kenya oo ka dhacay Gedo
Warar 25 September 2020 13:48